Thae From Soundcloud - The Fastest of Mp3 Search Engine™
1. ထူးအိမ်သင် − နွေဦးကံ့ကော်
By Thae Pwint
2. سعيد السعد - غرتك الدنيا حفلة
3. حرقة كرت - عيشا
4. Jabir Khan Jabir- ma tou thae pibaan
By Asif Khoja
singer : Jabir khan Jabir
5. ملحم زين - قتلوني عيونا السود
6. ဒွေး - တခါတလေ
တခါတလေ နှုတ်ဆိတ်မှုများစွာ... တခါတလေ မွန်းကြပ်မှုများစွာ... တခါတလေ အိပ်မရခြင်းများစွာ... ငါဟာ နာကျင်ခြင်းများစွာနဲ့ ... အဖြေတစ်ခုကိုရှာ တခါတလေ စိတ်ပျက်မှုများစွာ... တခါတလေ နွေရက်ပေါင်းများစွာ... တခါတလေ သံသယတွေများစွာ... ငါဟာ တခါးပေါက်တွေများစွာနဲ့.... အဖြေတစ်ခုကိုရှာ လိုအပ်ချက်တွေ မြေလှန်ရှာမတွေ့နိုင် ... ဖြစ်ချင်တာကို ရိုက်ချိုးပြီး... ဖြစ်သင့်တာကို ရင်မှာပိုက်... ဘ၀ပေးအသိကို သံမှိုရိုက်... ၀င်ပြီးတဲ့ ဒီအခန်းထဲ .. .. ပျော်အောင်အိပ်လေ တခါတလေ ချစ်တတ်မှုများစွာ... တခါတလေ တင်းကျပ်မှုများစွာ... တခါတလေ သိတတ်မှုများစွာ... ငါဟာ နှလုံးသားတွေများစွာနဲ့ ... အဖြေတစ်ခုကိုရှာ တခါတလေ ခေါင်းငုံ့မှုများစွာ... တခါတလေ ထိန်းချုပ်မှုများစွာ... တခါတလေခွင့်လွှတ်မှုများစွာ... ငါဟာ ရိုးသားမှုများစွာနဲ့... အဖြေတစ်ခုကို ရှာ
7. အချစ်သည်လေပြည် − ဇော်ဝင်းထွဋ်
ခန်းဆီးလေးတွေ တဖျတ်ဖျတ်လှုပ်ခါသွား၊ သစ်ရွက်ကလေးတွေ မြေပြင်ပေါ်ခ ပင်ရှည်မြက်တွေ ယိမ်းက သူလာရာလမ်း သူ့ခြေရာများ... ................................................ သူ့ရဲ့ခြေရာ ကိုယ် ရိပ်စားမိ အဖြေတွေ ရှာကြည့်ခဲ့တယ် လေပြည်ရယ် မင်း သိပ်တတ်နိုင်တယ် ....
8. حداي حداي غزال الحي - طوني حنا
9. زينة لبست خلخاللا
By hatton aubrium
11. Pan Yaung Chel - A Thae Kwel Thu
ဂရေဟမ်၊ ပန်းရောင်ခြယ် – Wake Up Daddy 1.ကာတွန်း (သို့) ကမ်းမဲ့အလွမ်း – ဂရေဟမ် 2.အသဲကွဲသူ – ပန်းရောင်ခြယ် 3.မရွာနဲ့အုံးမိုး – ဂရေဟမ် 4.ဒိုင်ယာရီလေးသက်သေ – ပန်းရောင်ခြယ် 5.Wake Up Daddy – ဂရေဟမ် ပန်းရောင်ခြယ် 6.ဒီညတော့တို့ငိုမယ် – ဂရေဟမ် 7.The Only One – ပန်းရောင်ခြယ် 8.ယုံထားပေးပါ – ဂရေဟမ် 9.နင်နဲ့ငါ – ဂရေဟမ် 10.တကယ်ပဲချစ်ရဲ့လား – ပန်းရောင်ခြယ် 11.မင်းနဲ့ဝေးပြီးနောက် – ဂရေဟမ် 12.People Are – ပန်းရောင်ခြယ် 13.ဘောင်ကျော်သူ (ကြိုးပြတ်သူ) – ဂရေဟမ် 14.ငါ့ကမ္ဘာ – ဂရေဟမ်
12. အဝေးဆုံးဝေးသွားလည်း − ထူးအိမ်သင်
ကိုယ် ငိုနေပြီမျက်ဝန်းတွေ နှုတ်ဆက် အကြင်နာဆုံးမင်းထွက်သွားချိန် အမှောင်ညထဲမှာ တစ်ယောက်ထဲသာဝမ်းနည်း ရင်ထဲကြယ်စင်တွေ ကြွေလွင့်နေ တို့အ်ိပ်မက်တွေ ပြိုယိုင်လို့တစ်စစီကွဲကြေ မဆုံနိုင်ဘူးလေ အချစ်ဆုံးရေ ကိုယ်တို့ဝေး………………………….. အမှောင်ကမ္ဘာမှာ ထားရစ်ခဲ့တော့ အလင်းမဲ့ကိုယ့်ညထဲ နာခံပါ အနိုင်းမဲ့တဲ့ အမိအဖရဲ့မေတ္တာပဲ ဖြူစင်စွာအမုန်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးသားကကြေကွဲ ထာဝစဉ်သာ အဆုံးမဲ့အချစ်နဲ့ ခွင့်လွတ်ခဲ့ပါတယ် အဝေးဆုံး ဝေးသွားလည်း…………… ကိုယ် …..နာကျင်နေ စိတ်ကူးတွေ အတိတ်နဲ့ အနာဂါတ်များ အဆုံးသတ်သွားချိန် ရင်ခုန်မှုတွေ ဘ၀ထဲမှာ အေးစက် လေထဲ တိမ်စိုင်လိုလွင့်မြောနေ အဆွေးဆုံးညတွေ ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲဖြတ်ကျော်ဆဲလေ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ နောက်ဆုံးအကြိမ် ကိုယ်တို့ဝေး…………. အမှောင်ကမ္ဘာမှာ ထားရစ်ခဲ့တော့ အလင်းမဲ့ကိုယ့်ညထဲ နာခံပါ အနိုင်းမဲ့တဲ့ အမိအဖရဲ့မေတ္တာပဲ ဖြူစင်စွာအမုန်းမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ နှလုံးသားကကြေကွဲ ထာဝစဉ်သာ အဆုံးမဲ့အချစ်နဲ့ ခွင့်လွတ်ခဲ့ပါတယ် အဝေးဆုံး ဝေးသွားလည်း……………… ထာဝစဉ်ငြိမ်းချမ်းလွန်းတဲ့ လမင်းလေး မင်းမဲ့နေမလား ပူလောင်လွန်းတဲ့မင်းမျက်ရည်များက စီးဆင်းလို့နေမလား ကြင်နာမှုနဲ့မင်းရဲ့အပြုံးများ မေ့ပစ်ဖို့ခက်နေဦးမလား……. တို့နှလုံးသား……………………. အမှောင်ကမ္ဘာမှာ ထားရစ်ခဲ့တော့ အလင်းမဲ့ကိုယ့်ညထဲ…… အဝေးဆုံးဝေးသွားလည်း………
13. ရွာသာရွာပါမိုး − မဒီ
ကြည့်စမ်း... ပတ်ဝန်းကျင်တလောကလုံး... မိုးတိမ် မိုးတိမ်များဖုံး... လျှပ်ပန်းတွေလက်နေ ကောင်းကင်ထဲ..